ထုတ်ကုန်များ > Tert-Butyl 2-Oxo-7-Azaspiro[3.5]Nonane-7-Carboxylate (203661-69-2)
CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့်  Nonane-7-Carboxylate (3.5-7-203661) Tert-Butyl 69-Oxo-2-Azaspiro အမြောက်အမြားထုတ်လုပ် synthesize နှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
SKU: 203661-69-2 အမျိုးအစား: သည်အခြားဒြပ်ပေါင်းများ
Tert-Butyl 2-Oxo-7-Azaspiro[3.5]Nonane-7-Carboxylate (203661-69-2) video
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate ဓာတုနှင့်ကာယ Properties ကို
NO CAS 203661-69-2
မော်လီကျူးအလေးချိန် (ဆ / mol) 239.3
အရည်ပျော်မှတ် 55-56 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရေဆူမှတ် 349 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Monoisotopic Mass (ဆ / mol) 239.152
အဘို့အ2ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Tert-Butyl 2-Oxo-7-Azaspiro[3.5]Nonane-7-Carboxylate (203661-69-2)
APICMO, tert-Butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate, 203661-69-2 အမြောက်အမြား synthesizing နှင့်ထုတ်လုပ်, ထုတ်လုပ်ခြင်းများအတွက်ရေပန်းစားကုမ္ပဏီဘွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအပေါ် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာအဖြစ်ငါတို့ရှိသမျှသည်ထုတ်ကုန်များအတွက်အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးအာမခံပါသည်။
Tert-Butyl 2-Oxo-7-Azaspiro [3.5] Nonane-7-Carboxylate, 203661-69-2 ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြ
boron အက်ဆစ်နှင့် Ester ။
Aldehydes နှင့် ketones ။
Carboxylic acid နှင့် Ester ။
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate ။
7-အဆောက်အအုံ-2-oxo-7-azaspiro [3 ...
7-အဆောက်အအုံ-2-oxo7-azaspiro [3.5] nonane ။
7-tert-Butoxycarbonyl-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate ။
2-Oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylatetert-butyl Ester ။
2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylic အက်ဆစ် tert-butyl Ester ။
2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate tert-butyl ။
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate, 203661-69-2 များအတွက်ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံ။
Tert-Butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate, အရောင်ဖြူသည်နှင့်အစိုင်အခဲသို့မဟုတ်အမှုန့် form မှာပါရှိပါတယ်။
203661-69-2 အခန်းအပူချိန်မှာယေဘုယျအားဖြင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားကြီးသောဓာတ်အေးဂျင့်များအားအက်ဆစ်နှင့်ဘေ့စထိတွေ့ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘွန်း Donor- 0
203661-69-2 computing Properties ကို
အတိအကျ Mass (ဆ / mol) 239.152
မိုးသည်းထန်စွာ Atom အရေအတွက် 17
Topological Surface ကဧရိယာ 46.6 တစ် ^ 2
XLogP3-AA ကို 1.2
ပုံစံလုပ်ရန် Atom Stereocenter 0
undefined Atom Stereocenter 0
သတ်မှတ်ဘွန်း Stereocenter 0
undefined ဘွန်း Stereocenter 0
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate (203661-69-2) အတွက်ပေါင်းစပ်လမ်းကြောင်း
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောညွှန်ပြအဖြစ် 203661-69-2 ဖန်တီးစေခြင်းငှါအရာသုံးခုလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်;
396653-31-9tert-butyl 1,1-ဃ ...
ရှေ့ပြေးခြင်းနှင့် tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate, 203661-69-2 ၏မြစ်အောက်ပိုင်းထုတ်ကုန်များ
203661-69-2 Applications ကို
tert-butyl 1-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate နှင့်အတူအန္တရာယ် Associated ။
tert-Butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate အဘို့ရှေးဦးသူနာပြုဆောင်ရွက်ချက်များ။
သငျသညျ 203661-69-2 မျိုသို့မဟုတ်သုံးစွဲလျှင်အန်သွေးဆောင်ဘယ်တော့မှမ။
ထိုခဏခြင်းတွင်ပြီးတော့ရေကိုသောက် 15 မိနစ်ရေများများနှင့်အတူပါးစပ်ဆေးကြောပါ။
သင်ညစ်ညမ်းအဝတ်အစားနှင့်ဖိနပ်ကိုဖယ်ရှားအဖြစ်အကြောင်းကို 15 မိနစ်ဘို့ရေကိုအပြေးများများနဲ့အတူဆေးကြောဖို့ non-ပွန်းစားဆပ်ပြာကိုသုံးပါ။
လုံခြုံရေးရေချိုးခန်းနှင့် eyewash ကာကှယျမှုရယူထားပါသည်အာမခံပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောသဲသို့မဟုတ် vermiculite အဖြစ်အာဂွန်စုပ် အသုံးပြု. မဆိုယိုဖိတ်စုဆောင်းပြီးတော့စွန့်ပစ်ခြင်းများအတွက်တံခါးပိတ်ကွန်တိန်နာအတွင်းစောင့်ရှောက်လော့။
ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ကို clean up နှငျ့သငျတူဖို့လုံလောက်တဲ့လေဝင်လေထွက်ခွင့်ပြုအာမခံပါသည်။
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်အဘို့အပယ်သွား lockable ဝန်ကြီးအဖွဲ့အတွင်းဓာတုထားပါ။
tert2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate (203661-69-2) သိုလှောင်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု -butyl
ကွာအားကောင်းတဲ့ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များအားအက်ဆစ်နှင့်ဘေ့စကနေအခန်းအပူချိန်သည်နှင့်ကြောင်းအကြံပြုအခြေအနေများအောက်တွင် Store မှာ။
အသားအရေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး wear မျက်စိဘေးကင်းလုံခြုံမှုမျက်မှန်နှင့်မျက်နှာမျက်နှာဖုံးသည်။
ယိုစိမ့်မဆို spillage လည်းမရှိလြှငျ, impervious ဘွတ်ဖိနပ်, မိုးသည်းထန်စွာရော်ဘာနှင့်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအသက်ရှူကိရိယာဝတ်ဆင်။
အဆိုပါ spillage ဧရိယာလျှော်လုံလောက်စွာကလေခတ်။
ထိုခဏခြင်းတွင်ရေ copious ငွေပမာဏနှင့်သင်၏အသားအရေဆေးကြောပါ။
တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူ 203661-69-2 နှငျ့ပတျသကျသောမီး၏အမှု၌, မီးကိုချွတ်ပယ်ရန်, ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့တဲ့ဓာတုအမှုန့်အရက်-ခံနိုင်ရည်သို့မဟုတ်ပေါ်လီမာရေမြှုပ်ကိုအသုံးပြုပါ။
ဂေါ်ပြားကို အသုံးပြု. အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ထက်တောင်ဦးသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ခြင်းမပြုမီတံဆိပ်ကပ်ကွန်တိန်နာမှတူညီတဲ့အတွက်စုဆောင်းဖို့ထိုကဲ့သို့သောသဲလုံးနှင့်အမျှအာဂွန်စုပ်ကိုအသုံးပြုပါ။
tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate (203661-69-2) အာရုံခံစားမှုနှင့် reactivity
အခန်းအပူချိန်မှာသိမ်းဆည်းထားသည့်အခါ 203661-69-2 လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
အစိုင်အခဲနှင့်အရည်စွန့်ပစ်မှုအတွက်အာဂွန်စုပ်တစ်ဂေါ်ပြားကို အသုံးပြု. ဓါတုစွန့်ပစ်စုဆောင်းနှင့်တံဆိပ်ကပ်ကွန်တိန်နာအတွင်း ထား. , သင့်ဒေသခံစွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းအခွင့်အာဏာတိုင်ပင်ပြီးနောက်အထူးစွန့်ပစ်အဖြစ်ဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေး။
တစ်ဦးကမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့အရည်ပျော်ပစ္စည်းအတွက်ဓာတုရောမွှေသို့မဟုတ်ပျော်; burner နဲ့တစ်ဦး scrubber ပြီးနောက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်တစ်ဦးနှင့်အတူတပ်ဆင်သောဓာတုမီးရှို့ဖျက်ဆီးထဲမှာမီးမရှို့
Tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate သင်္ဘောအင်ဖို
203661-69-2 တင်ပို့ဘို့ Non-အန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစလေထုနှင့်မြေအားဖြင့်သာမန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့သင့်လျော်သည်။
ဒီဓာတုအားလုံးပစ္စည်းများ Sara ခေါင်းစဉ် iii, ပုဒ်မ 302 အားဖြင့်သာတည်စည်းမျဉ်းအစီရင်ခံမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒီထုတ်ကုန် Sara ခေါင်းစဉ် III ကိုပုဒ်မ 313 နေဖြင့်သတ်မှတ်အစီရင်ခံတံခါးခုံကိုအဆင့်ဆင့်ထက်မပိုပါဘူး။
ကျနော်တို့ဘဝကသိပ္ပံ, ပစ္စည်းသိပ္ပံ, ဓာတုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, Chromatography နှင့်ပိုပြီးအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နေသောကျွမ်းကျင်သူများကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအတွက်ဂုဏ်ယူ။
Tert-butyl 2-oxo-7-azaspiro [3.5] nonane-7-carboxylate (203661-69-2) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
သင်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး  nonane-7-carboxylate, 3.5-7-203661 tert-Butyl 69-oxo-2-azaspiro လိုအပ်ပါသလား? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်သင့်အလို့ငှာထားပါ။
ဘရောင်း, ဒင်း, G .; Bernstein, ပေတရု R ကို .; Griffin, အန္ဒြေ, Wesolowski, စတိဗ်; Labrecque, ဒင်းနစ်; Tremblay, အလုပျသကို C .; Sylvester, မာကု, Mauger, စယ်; Edwards က, Phillip: D .; Throner, Scott R ကို .; Folmer ဂျိမ်းစ် J ကို .; Cacciola, ယောသပ်; Scott, ရွှံ့စေး; Lazor, Lois တစ်ဦးက .; Pourashraf, Mehrnaz; Santhakumar, Vijayaratnam; Potts ဝီလျံက M .; Sydserff ရှိမုန်, Giguere, Pascal, Levesque, Carine; Dasser, မိုဟာမက်; Groblewski, ဆေးပညာဓာတုဗေဒ, 2014, vol ၏ Thierry ဂျာနယ်။ 57, #3စ။ 733 - 758
Jochen Kuhlmann, အေ Dalhoff, H.-J. Zeiler, Quinolone Antibacterials, Springer သိပ္ပံ & စီးပွားရေးမီဒီယာ,6ဒီဇင်ဘာ 2012 - ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ -page 400-404 ။
ရှာရုန်အယ်လ် Crowell-Davis က, သောမတ်စ် Murray, ယောဟန် Wiley & သားကုသရေး Psychopharmacology9ဇန်နဝါရီ 2008, စာမျက်နှာ 102-105 ။ ။
အကောင်းဆုံး Tert-Butyl 2-Oxo-7-Azaspiro [3.5] Nonane-7-Carboxylate နှင့်ဈအစဉ်အဆက်ခဲ့ကြဝန်ဆောင်မှု, Nice အတွေ့အကြုံကို